Wasaaradda Duulista Oo Ka Hadashay Sababta Ay Dib Ugu Kiraysatay Xaruntii Ay Xaraashtay | Somaliland.Org
Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasaarradda Duulista Hawadda iyo Gaadiidka Cirka Somaliland ayaa tafaasiil ka bixisay asbaabaha ay ugu sii jirto isla markaana ay dib ugu kiraysatay dhismihii ay hore u xaraashtay ka dib markii ay sheegtay inuu cidhiidhi ku yahay oo aanu ku filayn inuu qaado waaxaha kala duwan ee wasaaraddaas.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Duulista hawadda iyo gaadiidka cirka Axmed Dalal Faarax oo aanu xalay arrintaasi wax ka weydiinay ayaa sababeeyay waxa ku kalifay inay dib u kiraystaan dhismihii ay iibiyeen isagoo arrintaasi ka jawaabayayna wuxuu yidhi “Way jirtaa inaanu kiro ugu sii jirno dhismihii wasaaradda duulista hawadda ee la iibiyay. Waxa jirtay in markii la xaraashayay xaruntii wasaaradda anagu waxaanu doonaynay in marka la iibiyo dhismaha isla markiiba aanu lacagta ku dhisano xarun. Waxa aanu samaynay nashqadii dhismaha cusub, hase yeeshee Wasiirkii hore ee Maaliyadda ayaa soo jeediyay in lacagtii xarunta wasaaradda lagu iibiyay lagu daro miisaaniyadda qaranka. Markaa ka dibna dhismaha cusub ee wasaaradda kharashka lagu dhisayo lagu daro miisaaniyadda cusub markaa intii Miisaaniyadda la ansixinayay ayaa muddo qaadatay taas ayaa kaliftay inaanu dib u kiraysano xaruntii hore ee wasaaradda.”
Axmed Dalal Faarax wuxuu sheegay in dhawaan Gudida qandaraasyaddu bixin doonaan shirkadii fulin lahayd dhismaha cusub ee wasaaraddaasi isla markaana ay wasaaradiisu dhisan doonto dhisme weyn oo ku filan shaqadda wasaaraddaas.
Agaasimaha Guud oo ka jawaabayay sababta xilka looga qaaday La Taliyihii Wasiirka Duulista Hawadda Maxamed Xirsi Cilmi (Qatalla) oo uu ku eedeeyay inuu u adeegayo dawladda Soomaaliya, waxa uu yidhi “Ninkani waa nin qurbo-joog ah oo degan wadanka Holland, markaa Wasiirka ayuu u yimid ka dibna wuxuu u sheegay inuu aqoon u leeyahay maamulka hawadda, waxaanu ka codsaday shaqo. Wasiirkunu wuxuu u sheegay inaanu miisaaniyadda wasaaradda uga qori Karin mushahar isla markaana aanu Ha’yadahana uga qori Karin lacag ka dibna waxay isku afgarteen inuu u la shaqeeyo qaab mudatadawacnimo. Waxaana lagu daray Gudida maamulka hawadeena masuulka inooga ah inay la shaqeeyaan Ha’yada ICOA sidaasi ayuu wasaaradda ula shaqeynayay.”
“Bishii November ee sanadkii hore ayaanu aniga iyo Wasiirka Duulista Hawaddu dalka Canada kaga qeyb-galay shir lagaga hadlayay maamulka Hawadda, xiligaasi waxa Ha’ayadii maamulka hawadda maamushaa Wasiirka Duulista ka dalbatay inuu Gudidan ku soo daro dad ku dhex jira maamulka wasaaradda oo go’aanna qaadan kara. Markaa Wasiirku aniga (Agaasimaha guud) ayuu igu bedelay ninkana wuxuu u soo jeediyay inuu ila shaqeeyo hase yeeshee wuu diiday ka dibna sidaasi ayuu iskaga tagay,”ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Duulista Hawaddu.
Axmed Dalal oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Shirkii dambe ninkii wuxuu soo fadhiistay isagoo warqad ka sita Raysal Wasaaraha TFG-da Soomaaliya oo leh waxaan wakiil u ahay dawladaasi oo aan la Taliye u ahay. Markaa wuxuu cadaawad u qaaday qaranka Somaliland,wuxuu markii dambe been ka sheegay dawladda iyo wasaaradda, waxaanu kuwayt u gudbiyay qoraalo been abuur ah oo uu leeyahay qandaraasyadii dib u habaynta madaaradda Hargeysa iyo Berbera waxa la siiyay dad gaar ah. Taasina waxay ahayd been cad waayo muddo ayuu socday naadinta qandaraaska balaadhinta madaaraddu oo waxa maamulayay Gudida qandaraasyadda wakiil ka socday Kuwait-na goob joog ayuu ahaa.”
Previous PostGuddida Wanaag Farista Gobolka Hawd Oo Wasaaradda Diinta Baaq U DirayNext PostWar-laliska idaacadii weynayd oo soo gaadhay Berbera iyo Wasaaradda warfaafinta oo ka hadashay	Blog